September 2021 - Citeste-ne
September 5, 2021 adminLeaveaComment on मृत्युको मुखमा पगुेका बिरामीलाई डाक्टरले र’क्सि खु’वाएर बचाए पछि…..
एजेन्सी । अहिलेसम्म सुन्दै आएका छौ, अ’ल्को’हल पिउनु स्वाथ्यको लागि हानिकारक हो । अ’ल्कोह’ल पि’उदाँ शरीरमा ली’वरस’हित धेरै प्रकारका रोग लाग्छन् । तर, भियतनाममा भने एउटा डाक्टरहरुको टिमले बिरामीलाई अ’ल्कोह’ल पि’ला’एर ज्या’न बचाएका छन् । म’र्न लागेको बिरामीलाई डाक्टरहरुले बि’य’र पि’ला’एका हुन् । एकजना बिरामीलाई बचाउन डाक्टरहरुले १५ क्यान बि’यर पि’ला’एका हुन् । वास्तवमा गु’येन […]
कस्तो रहला तपाईको सोमबारको भाग्य? भदौ २१ गतेको राशिफल हेर्नुहोस्
September 5, 2021 adminLeaveaComment on कस्तो रहला तपाईको सोमबारको भाग्य? भदौ २१ गतेको राशिफल हेर्नुहोस्
मेषः नयाँ कामको प्रस्ताव प्राप्त हुनेछ भने सहयोगीहरूले साथ दिनेछन् । कमजोरी सुधार गर्दै फाइदा उठाउने समय छ । बिछोडिएका आफन्तजनसँग भेटघाटको अवसर जुट्नेछ । निर्णय लिएर पनि शंका गर्ने बानीले पछि परिनेछ । परिस्थितिअनुसार चल्न नसक्ता दु:ख पाइनेछ । बृषः सुरुमा खर्च बढ्नुका साथै अर्थअभावले सताउन सक्छ । फाइदाका लागि दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला । […]
केटाकेटा बिच भयो यसरी धुमधाम बिवाह?
September 5, 2021 adminLeaveaComment on केटाकेटा बिच भयो यसरी धुमधाम बिवाह?
आर्थिक बस्नेत र धिरज बस्नेत जो एक समलिङ्गी जोडि हुन ।पछिल्लो समय केटाकेटा बिच बिहे गर्ने प्रचलन केही मात्रामा बढ्दो भएपनि अझै नेपाली समाजले यसलाइ खुल्ला रुपमा स्विकार्न सकेको छैन । उनिहरु दुबैले धुमधामका साथ बिवाह गरेका छन् ।आर्थिक भने केटा र धिरज भने केटि भएको भन्दै दुबै केटाकेटाले बिवाह गरेका हुन् ।सातौ जुनिसम्म पनि […]
September 5, 2021 adminLeaveaComment on ३ वर्ष पहिले बुवाको मृ’त्यु, अहिले आमा ले पनि संसार छोडिन् : बिचरा यी नाबालक हरुको बिचल्ली !
स्याङ्जा जिल्ला वालिङ 12-भण्डारीथुम्का माईति घर तथा साविक पिडिखोला गाबिसको कुभिन्डे गाउँ घर भई हाल रुपन्देहीको सितलगर भन्ने ठाउँंमा बसोबास गर्दै आउनु भएकि छविकला चापागाईको आकस्मिक नि’धनले परिवारमा रहेका दुई साना साना नावालक छोराहरुलाई ब’ज्र’पात नै परेको हामी सबैमा अवगत नै छ।उहाको श्रिमानको तीन बर्ष पहिले लामो समयको विरामि पश्चात् स्वर्गवास भएको थियो भने भएको […]
रामकुमारी झाक्रीले रोजेको पद माधव नेपालले अर्कैलाई सुम्पिए !
September 5, 2021 adminLeaveaComment on रामकुमारी झाक्रीले रोजेको पद माधव नेपालले अर्कैलाई सुम्पिए !
नेकपा एकीकृत समाजवादीले सो पार्टी चर्चित युवा नेतृ राम कुमारी झाक्रीले राजेको पद अर्कैलाई सुम्पिएको छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार एस पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको उक्त कदमको झाक्रीले विरोध गरेकी हुन् । पार्टीले तत्कालीन एमालेमा स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाललाई अन्तरिम महासचिवको जिम्मेवारी दिएको छ । उक्त पद पाउने झाक्री आशावादी थिइन् । नेकपा […]
September 5, 2021 adminLeaveaComment on धन लाभ हुनुअघि मिल्छन् – यस्ता संकेत ‘ॐ’ लेखी पुरा पढ्नुहोस
शास्त्रमा शुभ र अशुभ विषय बारे उल्लेख गरिएको पाउन सकिन्छ।अहिलेको वैज्ञानिक युगमा यस्ता कुराहरुमा विश्वास नगर्नेको संख्या उल्लेख्य छ तर केहीले भने यस्ता कुरुालाई सही मान्छ जिवनमा विभिन्न कालखण्डमा आउने विभिन्न संकेतले शुभ र अशुभ कुराबारे जानकारी दिने धर्म शास्त्रहरुमा उल्लेख गरिएको छ** त्यस्ता संकेतमा भविष्यमा हुने घटना परिघटनाका बारेमा सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ।यस्तै खालका […]
फुटबल हेर्न एमाले अध्यक्ष ओली दशरथ रंगशालामा
September 5, 2021 adminLeaveaComment on फुटबल हेर्न एमाले अध्यक्ष ओली दशरथ रंगशालामा
२० भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दशरथ रंगशालामा भएको नेपाल र भारतबीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल अवलोकन गर्न पुगेका छन् । आइतबार अपरान्ह उनी फुटबल हेर्न दशरथ रंगशालामा पुगेका हुन् । नेपाल र भारतबीच दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल आइतबार हुँदैछ । यसअघि गत बिहीबार भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल र भारतले १-१ को बराबरी […]
भारतसँग नेपाल पराजित
September 5, 2021 adminLeaveaComment on भारतसँग नेपाल पराजित
काठमाडौं । दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल पराजित भएको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा आइतबार भएको खेलमा नेपाल भारतसँग २-१ले पराजित भएको हो । खेलको दोस्रो हाफमा मैदान प्रवेश गरेका फारुख चौधरीले ६२ मिनेटमा गोल गर्दै भारतलाई अग्रता दिलाए । फारुख ४६औँ मिनेटमा विपीन सिंहको स्थानमा मैदान प्रवेश गरेका थिए । उनले नेपाल डिफेन्सको फाइदा उठाउँदै […]
September 5, 2021 adminLeaveaComment on सेतो नागलाई देख्ने बित्तिकै ॐ लेखी एक सेयर गरि दर्शन गरौ, तपाईले नसोचेको
सेतो नागलाई देख्ने बित्तिकै ॐ लेखी एक सेयर गरि दर्शन गरौ, तपाईले नसोचेको ७ दिन भित्र मनोकामना पूरा हुनेछ। सेतो नागलाई देख्ने बित्तिकै ॐ लेखी एक सेयर गरि दर्शन गरौ, तपाईले नसोचेको ७ दिन भित्र मनोकामना पूरा हुनेछ। हाम्रो शरीरमा सकारात्मक तरङ्ग संगै नकारात्मक तरङ्ग रुपनि प्रवाहित भैरहेका छुन्छन ।राम्रो समय र ग्रहहरु पनि मिलेर […]
यीनै हुन् आमा, श्रीमती, दुई छोरि र एक छोरा जसको भैदियो एकै चिहान !
September 5, 2021 adminLeaveaComment on यीनै हुन् आमा, श्रीमती, दुई छोरि र एक छोरा जसको भैदियो एकै चिहान !
घरमाथि मोटरबाटो खनेपछि कुश्मा नगरपालिका–३ दुर्लुङ बाँधस्वाँराका माधव शर्मा पौडेल अर्को घर किनेर बाटोमाथि सरे। सुरक्षित ठानेर किनेको घरमा उनले परिवारसँग एक वर्षभन्दा बढी बिताउन पाएनन्। बिहीबार मध्यरातमा खसेको पहिरोले घर पुर्‍यो। भित्रै पुरिएका आमा, श्रीमती, दुई छोरी र एक छोरालाई उनले गुमाए। विदेशबाट फर्किएर सुरक्षित घरमा बस्ने उनको सपना पहिरोसँगै पुरियो। छिमेकी प्रताप गिरीका […]